06 | October | 2014 | Danya Wadi
By danyawadi October 6, 2014 Leaveacomment
အောင်ရဲ မောင်မောင် 06.10.2014 ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၃၃ နိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်သမား ၇၈၁ ဦးစာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံကလည်း လက်ခံ ရရှိထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မှုခင်းဌာန ရဲမှူးကြီးတဦး ကပြောပါတယ်။ ရှေ့လထဲမှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုးဘားမား ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်း အခုထဲက တိုးမြှင့်ထားတယ်လုို့ သူကပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ၆၉ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်ပါဝင်ပြီးတော့ ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ ဆွေးနွေးပွဲကို အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ […]
The Express Times သရဏင်္ကရာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီးနောက် ဘုရားလေးဆူ ပွင့်တော်မူရာ ထိုသာရမဏ္ဍ ကမ္ဘာ၌ပင် လူတို့၏အသက်တမ်း၊ အနှစ်ကိုး သောင်းတမ်းမှ တဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်၍ ဆယ်နှစ် သက်တမ်း၊ ထိုမှတစ်ဖန် တိုးတက်ပြန်ရာ အသင်္ချေယျတမ်း၊ ထိုအသင်္ချေယျတမ်းမှ တစ်ဖန် ဆုတ်ယုတ်ပြန်ရာ အနှစ်တစ်သိန်းတမ်းသို့ ရောက်လေလျှင်ဒီပင်္ကရာ ဘုရားရှင် ပွင့်တော် မူခဲ့သည် ဒီပင်္ကရာဘုရားအလောင်းတော် ဖွားမြင်တော်မူခြင်း ဒီပင်္ကရာဘုရား အလောင်းတော်သည် ပါရမီတော်တို့ကို ဖြည့်ကျင့်တော် မူပြီးသည်၏ အဆုံး၌ အလောင်းတော်တို့၏ဓမ္မတာအတိုင်း တုသိတာ နတ်ပြည်၌ စံနေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့စံနေတော် မူစဉ် နတ်ဗြဟ္မာတို့က အလောင်းတော်နတ်သားအား ဘုံသုံးပါးတွင် ဘုရားဖြစ်ရန် အချိန်တန်ပြီ ဖြစ်၍ လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်ကာ ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူပါရန်တောင်းပန်ခဲ့ကြ ကုန်၏။ အလောင်း တော်သည် နတ်ဗြဟ္မာတို့၏ တောင်းပန်မှုကို […]
မချစ်ခင်အပ်သော ရဟန်း၏ အင်္ဂါ ဆယ်ပါး
The Express Times တစ်နေ့သောအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ကွယ်လွန်သွားသော ရဟန်းတစ်ပါးကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ (၁) အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လုပ်တတ်၍ အဓိကရုဏ်းငြိမ်းအေးခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့မရြှိခင်း၊ (၂) အကျင့်သိက္ခာကို မလိုလားသူဖြစ်၍ အကျင့်သိက္ခာဆောက်တည်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့မရှိခြင်း၊ (၃) ယုတ်မာသောအလိုရှိသူဖြစ်၍ ယုတ်မာသောအလိုကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့ မရှိခြင်း၊ (၄) အမျက်ဒေါသကြီးသူဖြစ်၍ အမျက်ဒေါသ ပယ်ဖျောက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့မရှိခြင်း၊ (၅) သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်တတ်သူဖြစ်၍ သူ့ကျေးဇူးကိုချေဖျက်ခြင်းကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့မရှိခြင်း၊ (၆) ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသူဖြစ်၍ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲမှုကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းမှု မရှိခြင်း၊ (၇) လှည့်စားတတ်သူဖြစ်၍ လှည့်စားမှု မာယာ ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းကို ချီးမွမ်းလေ့မရှိခြင်း၊ (၈) တရားသဘောကို စူးစမ်းဆင်ခြင်လေ့ မရှိသူဖြစ်၍ တရားသဘောကို စူးစမ်းဆင်ခြင်ခြင်းကို […]
RB News October 5, 2014 New York — The OIC Ministerial Contact Group convened at the 69th United Nations General Assembly in New York. Important issues on Rohingya ethnic minority and strategies to findapermanent and lasting solution were discussed in the meeting. Delegations from several countries have expressed their concerns on the lack […]
ပါလက်စတိုင်းအားလွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ဆွီဒင် အသိ အမှတ်ပြု မည်
အောက်တိုဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – အစ္စရေး၏ မတရားသိမ်းပိုက်မှုနှင့် ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံနေရသည့် ပါလက်စတိုင်းအား လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် အသိမှတ်ပြုမည်ဟု ဆွီဒင်ဝန်ကြီးချုပ် စီတီဖန် လုဖ်ဗန်က ပြောကြားလိုက်သည်။ အစိုးရသစ်အားဦးဆောင်သည့် ၀န်ကြီးချုပ်၏ ပထမဆုံးအဖြစ် ယမန်နေ့က ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းတွင် စတီဖန်က ထိုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဥရောပ ၂၈ နိုင်ငံတွင် ပါလက်စတိုင်းအား ပထမဆုံးအသိအမှတ်ပြုသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ “အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်း ပဋိပက္ခကို နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ၂ နိုင်ငံတည်ရှိရေးနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ၂ နိုင်ငံ တည်ရှိရေးမှာ အပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုမှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဆွီဒင်ဟာ ပါလက်စတိုင်းကို အသိအမှတ်ပြုသွားမှာပါ” […]
လူသေအလောင်းများအစုလိုက်ပြုံလိုက် မြှုပ်နှံမှု မက္ကဆီတွင်တွေ့
အောက်တိုဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၄ M-Media – ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ကျောင်းသား ၄၃ ဦးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည့် မက္ကဆီကိုမြို့တစ်မြို့တွင် လူသေများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်နှံထားသည့် နေရာတစ်ခုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။ ဂွာရဲရိုးပြည်နယ်၊ အီဂွါလာမြို့ ဆင်ခြေဖုံးတွင် တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး အလောင်းများမှာ ပျောက်ဆုံးသွားသည့် ကျောင်းသားများ ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးရန်အတွက် မှုခင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ ပေးအပ်ထားသည်ဟု ဂွာရဲရိုး ပြည်နယ်တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အလောင်းများ၏ အရေအတွက်ကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသော်လည်း Reuters သတင်းဌာနကမူ အလောင်းများမှာ ၂၀ အထိရှိမည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ အလောင်းများကို ကျင်း ၆ ခုတွင်မြှုပ်နှံထားခြင်းဖြစ်ပြီး မက္ကဆီကိုအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကမူ လူများအား […]
White Card ကိုင်သူတွေကို မဲပေးခွင့် ပြုသင့် သလား
Myanmar census enumerators ask questions toafamily member while collecting information in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar, Monday, March 31, 2014. Enumerators fanned out across Myanmar on Sunday foracensus that has been widely criticized for st ဦးစည်သူအောင်မြင့် 04.10.2014 21:35 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေကို ဒုတိယ အကြမ် ပြန်ပြင်ဆင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်မှတ်ရေးထိုး […]